Kolontsaina - Dongguan Walley Machinary Technology Co., Ltd.
Vina arahin'orinasa (taratra ny toerana sy ny finoana fitantanana ambony)
A. Tonga mpamatsy mpifaninana indrindra amin'ny indostrian'ny milina marina
B. Miaraka amin'ny fitaovana tena tsara sy ny haitao mahavariana mba ho lasa mpanome tolotra tsara indrindra amin'ny indostrian'ny milina marina
C. Mamorona mpamatsy milina mazava tsara avo lenta
Asa fitoriana: (miaraka amin'ny fisehoan'ny andraikitra ara-tsosialy sasany)
Ny fakana ny masinina mazava ho azy ho toy ny mpitatitra dia mamorona lanja ho an'ny mpanjifa ary mahatsapa ny fijinjana roa heny ny toe-tsain'ny mpiasa sy ny sivilizasiôna ara-materialy.
Politika kalitao:mifantoka amin'ny kalitao, tsara indrindra; fanatsarana mitohy, fahafaham-po ny mpanjifa
Politika momba ny tontolo iainana:mitahiry angovo ary mampihena ny fako; miaro ny tany ary misoroka ny fandotoana;
Tokony hanaja ny lalàna sy ny lalàna isika, hiaro ny maintso, hampalaza ny fiofanana ary hanatsara hatrany.
Soatoavina fototra: asa be, fidiram-bola sy fandaniam-bola, fitantanana tsy fivadihana, zava-bitan'ny mpanjifa.
Ny "mpanjifa" eto dia midika hoe misolo tena ny mpanjifa, ny mpiasa, ny mpamatsy, ny orinasa ary ny fiaraha-monina!
Filozofia momba ny asa: tolona, ​​fanavaozana, fisakaizana ary fanoloran-tena, mahomby sy mahomby.
tolona:ny fikirizana dia ny toe-tsain'ny tsirairay amintsika hiasa mafy. Vantany vao mihemotra isika, dia hofongorana. Koa manamafy izahay fa tokony hifanaraka amin'ny tsirairay, hampirisika ny handroso ara-potoana, tsy hanohitra ny hieritreritra fandrosoana;
Fampandrosoana sy fanavaozana:Ny fanavaozana dia afaka manitatra ny sehatry ny fahaveloman'ny orinasa. Amin'ny fiheverana mifanaraka amin'ny fitsipika, ny mpiasa rehetra dia afaka mandray anjara amin'ny sehatra maro toy ny fanavaozana ny rafitra sy ny fanavaozana ny dingana amin'ny alàlan'ny hetsi-pianarana lehibe, mba hahatsapany fanavaozana ny mpiasa rehetra;
Firahalahiana sy fanoloran-tena:ny olona dia ny filozofia fototra ao Jixin. Miaro ny kolotsaina ao amin'ny fianakaviana izahay ary mamela ireo mpianakavy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hiray hina sy hifankatia, hanangona tanjaka, ho vonona handray anjara, hifanampy, ho tia ny asa ary ho tia an'i Wally, ary hihevitra ny orinasa ho trano;
Pragmatika sy mahomby:miaraka amin'ny toe-tsaina firaisan-kina, fiaraha-miasa amin-kitsimpo ary tsy fanodinkodinana andraikitra velively, afaka hahatratra ny tanjona amin'ny fomba mahomby isika Amin'ny alàlan'ny mekanisma mahomby, afaka miresaka mahomby, mandrindra ary mamaha ny olana tanteraka isika, manomboka amin'ny farany.